Umaki: i-walmart | Martech Zone
Enye yezinselelo ezihlekisa kakhulu ze-e-commerce kulezi zinsuku ukuthi bonke ohulumeni basekhaya bafuna ukugxumela ebhodini futhi bazinqumele intela yabo yokuthengisa ukuze benze imali ethe xaxa esifundeni sabo. Kuze kube namuhla, kuneziphathimandla ezingaphezu kuka-14,000 zentela e-United States ezinezigaba zentela yomkhiqizo ezi-3,000. Umuntu ojwayelekile othengisa imfashini online akaqapheli ukuthi uboya abangeze kumkhiqizo manje uhlukanisa izingubo zabo ngokwehlukile futhi kwenza lokho kuthenga
NgoLwesibili, ngoJulayi 3, i-2018 Douglas Karr
Ukumakethwa kwamaselula - kuyinto okungenzeka ukuthi uke wezwa ngayo, kepha, ngokunokwenzeka, ishiya isibhengezo sangemuva okwamanje. Ngemuva kwakho konke, kuneziteshi eziningi ezahlukahlukene ezitholakalayo zamabhizinisi, ukumaketha kwamaselula akuyona yini enganakwa? Impela - ungagxila kuma-33% wabantu abangasebenzisi amadivayisi eselula esikhundleni salokho. Ukusetshenziswa kwamadivayisi eselula emhlabeni kulindeleke ukuthi kukhule kufinyelele kuma-67% ngo-2019, futhi sinjalo